Diyaaradda Turkish Airlines oo ka baaqatay duulimaadkii ay ku taggi laheyd Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines, ayaa baaqatay duulimaadkeedii maalinlaha ahaa, ee ay ku taggi jirtay Magaalada Muqdisho Ee Xarunta Somaliya.
Shirkadda, ayaa Maamulka Garoonka Aadan Cadde ku soo wargelisay inaanay imaan doonin Magaalada Muqdisho, illaa iyo amar dambe.
Tani, ayaa waxay ka dhalatay markii shirkaddu ay wax jawaab ihi ka weyday Maamulka Garoonka Aadan Cadde, oo la xiriira in sharaxaad laga siiyo jugtii xooganeyd ee xalay laga maqlay Garoonka.
Rakaab ay Turkish Airlines ka soo qaadi laheyd Magaalada Djibouti, ayaa waxaa lagu wargeliyay in safarkoodii Muqdisho la baajiyay. Sidoo kalana dad kale oo lagu waday in ay ka qaado Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa loo sheegay inaanay maanta bixi doonin.
Xoogag la socday illaa laba doomood oo nooca dheereeya ah, ayaa waxay xalay soo weerareen Garoonka, iyagoona ka soo weeraray dhinaca loo yaqaano (Maaya Moorto), inkastoo dib loo eryay.
Xoogagan, ayaa xalay oo qura laba goor soo weeraray Garoonka. Weerarka hore wuxuu dhacay xilligii caweyska ee saacadda Magaalada Muqdisho, halka weerarka labaadna uu dhacay 2:30am.
Afhayeenka Ciidanka Nabad Ilaalinta Midowga Afrika (Amisom), Korneyl Paul Njuguna, ayaa sheegay in xalay laba goor la soo weeraray Garoonka, laakiin ay Ciidanka Amisom awood u yeesheen inay celiyaan dhawr doomood oo weeraradaasi loo adeegsaday, sida uu yiri.
Qarax xoogan ayaa lala beegsaday ciidamada kenya ee ku sugan xadka mandheera